Fahasamihafana eo amin'ny Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) sy iPad 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) sy iPad 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Hafa / Fahasamihafana eo amin'ny Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) sy iPad 2
Fahasamihafana eo amin'ny Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) sy iPad 2
1 Desambra 2011 Narotsak'i Olivia
Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) vs iPad 2 | Hafainganana, fampisehoana ary fiasa | Fomba feno raha ampitahaina
Ireo fitaovana finday dia mihamaro hatrany ny solosaina ary eo amoron'ny fanoloana PC amin'ny fampiharana lehibe rehetra mihitsy. Ireo takelaka PC dia noforonina mba hametrahana ny elanelana misy eo amin'ny PC sy telefaona finday iray, izay nanamora ny haben'ny efijery lehibe kokoa, mpikirakira haingana ary fampiasana mora kokoa noho ny finday. Ity takelaka maivana ity dia nanamarika ny tenany ho fitaovana finday malaza eo akaikin'ny telefaona finday.
Io fironana io dia nitombo be tamin'ny fampidirana Apple iPad be hyped, izay tena zavakanto indizeny. Saika taorian'ny herintaona nanombohana voalohany ny ipad, Apple dia tonga tamina zoky lahy iray ho azy, Apple ipad 2. Apple dia nanambara ny iPad 2 tamin'ny martsa 2011 ary namoaka izany tamin'io volana io ihany. Fahatongavana nandrasana tokoa, fa amin'ny lafiny sasany, mpamaky fo koa satria saika nitovy tamin'ny iPad izy io. Saingy ny zava-misy dia tsy maninona na mitovy ny endrik'izy ireo, ny iPad 2 dia niavaka ary nahazo ny fon'ny mpanjifa indray mipi-maso. Rehefa afaka 6 volana teo ho eo ny fandinihana mangina, Asus koa dia namorona marika Tablet PC azy manokana, izay nambara tamin'ny volana oktobra ary antenaina fa hivoaka amin'ny volana Desambra. Asehony mazava fa nampiasa tsara ny fotoana nandinihana i Asus mba hamoahana ny toetran'ny Tablet PC antsoina hoe Asus Eee Pad Transformer Prime TF201, izay mpandimby ny Prime TF101. Alohan'ny hivoahantsika am-pitoerana amin'ny antsipirian'ny isam-batan'olona dia hanomboka amin'ny famaranana aho ary hanaporofo aminao fa izany tokoa no izy. Raha ny fahombiazan'ny haitao sy ny benchmark dia tsy misy maharesy an'i Asus Eee Pad, na akaiky aza. Biby tsy misy fangarony ao anaty volo feno 10 santimetatra io. Saingy mijoro ny zava-misy fa, amin'ny lafiny fampiasana sy ny hakantony, tsy misy na inona na inona manakaiky ny Apple iPad 2. Izany no fahamarinana ao ambadiky ny fahombiazana lehibe azony isaina na aiza na aiza alehany.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, i Eee Pad dia Praiminisitra ao amin'ny kilasiny. Ny marimarina kokoa, ny Optimus Prime an'ny hazakazak'izy ireo. Asus dia nampiditra Perdana tamin'ny Nvidia's 1.3GHz quad-core Tegra 3 Processor. Transformer Prime no fitaovana voalohany nitondra fikirakirana an'io habeny io ary ilay voalohany nanasongadina ny NvidiaTegra 3. Mety ho ambany ny fanambarako raha hiteny aho fa tsy ity no processeur tsara indrindra hita ao amin'ny Tablet na fitaovana entina tanana ny mbola. Azontsika atao tsara ny mieritreritra fa manome ny tampon'ny sneak amin'ny tablette Android manaraka i Eee Pad. Ny processeur mihitsy dia nohamarinina amin'ny teknolojia Variable Symmetric Multiprocessing an'ny Nvidia, na amin'ny teny tsotra, ny fahaizana mifamadika eo amin'ny cores avo kokoa sy ambany arakaraka ny lahasa eo am-pelatanana. Ny mahatsara azy dia tsy ho tsikaritrareo akory fa nisy switch niseho avy any ambony ambony ka hatrany ambany rehefa vantany vao manidy lalao ianao ary mivadika mamaky.
Asus Eee Pad Transformer koa dia miaraka amina sary manaitra, indrindra ny vokatry ny riandrano anaty rano. Nvidia dia nilaza fa ny mpandrindra ny lalao dia nampifangaro ny fahafaha-manao piksela fanampiny an'ny GPU miaraka amin'ny herin'ny fikajiana ny cores maro handaminana ny fizika ao ambaniny. Ny RAM 1GB dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana farany sy fanovana.
Asus dia nanome efijery 10,1 santimetatra ho an'ny Super IPS LCD Capacitive touchscreen, mampiseho ny vahaolana 1280 x 800 miaraka amin'ny hakitroka pixel 149ppi. Ity dia manana vahaolana avo kokoa sy hakitroka pixel an'ny an'ny Apple iPad 2. Ny efijery Super IPS LCD dia ahafahanao mampiasa ny takelakao amin'ny hazavan'ny andro tsy misy olana. Izy io dia manana fampisehoana mahatohitra am-bava miaraka amin'ny herin'ny fampiratiana Gorilla Glass, sensor sensor ary sensor Gyro. Efa takelaka, natao ho lehibe kokoa noho ny telefaona finday. Fa ny nahagaga dia mavitrika 8.3mm ny hateviny, izay tsy mampino. 586g fotsiny ny lanjany izay maivana kokoa noho ny iPad 2. Tsy nanadino ny fakantsary koa i Asus. Manafintohina mivantana ny Apple iPad 2. Ity fakan-tsary 8MP ity no fakantsary tsara indrindra hitantsika hatreto tao amin'ny tablette PC rehetra. Izy io dia miaraka amin'ny fakana horonantsary 1080p HD, autofocus, flash LED, ary Geo-tagging miaraka amin'ny GPS Fanampiana. Nanolotra fakantsary anoloana miaraka amina Bluetooth v2.0 koa izy ireo ho fahafinaretana fatratra amin'ireo mpiresaka video. Satria i Asus dia manome fitehirizana anatiny na 32 na 64 GB ary ny fahaizana manitatra hatramin'ny 32GB amin'ny fampiasana karatra microSD, ny toerana hitahirizana ireo snaps avo lenta rehetra azonao dia tsy ho olana koa.
Hatreto dia miresaka momba ny sehatry ny fitaovana ao amin'ny Tablet izahay, ary ny tena manome azy ireo dia ilay takelaka nohavaozina Android v3.2 Honeycomb. Transformer Prime koa dia tonga tamin'ny fampanantenan'ny fanavaozana ny v4.0 IceCreamSandwich, izay antony lehibe indrindra hifaliana. Voalaza fa nilaza izahay fa ny tantelan'ny Honeycomb an'ny Prime dia tsy manao ny fifanarahana ara-drariny ho an'ny praiminisitra. Izy io dia manana banga tsy ho ela izay manatsara ny OS ho an'ny processeur dual core ihany, mbola tsy faritana ny fampiharana quad core. Aleo isika miandry ny fanavaozana v4.0 IceCreamSandwich ho an'ny vahaolana voatsabo tsara ho an'ny processeur multi core. Ankoatr'izany zava-misy izany, ny zavatra rehetra dia toa tsara ao amin'ny Asus Eee Pad. Izy io dia hita amin'ny endrika mahafinaritra miaraka amin'ny fiaramanidina miverina Aluminium na Amethyst Grey na Champagne Gold. Ny mampiavaka azy hafa amin'ny Eee Pad dia ny fahafaha-miantsona amin'ny dock keyboard QWERTY Chiclet feno, izay manatsara ny fiainana bateria hatramin'ny 18 ora, izay mihoatra ny mahatalanjona. Miaraka amin'ity fanampiana ity, Transformer Prime dia lasa kahie fotsiny isaky ny ilaina izany, ary mahafinaritra fotsiny izany. Tsy izany ihany, fa ity dock ity dia hanana pad pad, ary port USB izay tombony fanampiny. Na dia tsy misy ny baterian'ny add-on an'ny dock aza, ny batterie mahazatra dia voalaza fa 12 ora avy hatrany no miakatra. Na dia nofaritan'i Eee Pad aza ny fifandraisany amin'ny Wi-Fi 802.11 b / g / n miaraka amin'ny fahafaha-miasa toy ny wi-fi hotspot, dia tsy manana ny singa ny fifandraisana HSDPA amin'ireo toerana izay tsy mety misy wi-fi. Na dia ahiahiana mahazatra aza ny filalaovana horonantsary 1080p HD, Asus dia nanampy singa tsy nampoizina tamin'ny fampidirana SonicMaster teknolojia avo indrindra an'ny feo. Asus koa dia nanolotra fomba fampisehoana telo ary azo raisina ho toy ny Tablet PC voalohany nifanaraka tamin'ny paikady toy izany. Izy io koa dia misy ny kinovan'ny lalao demo izay mitazona ny fofonaintsika, ary antenaina fa hisy lalao bebe kokoa havaozina ho an'ny processeur multi core sy ny GPU fanapahana.
Rehefa avy namaky ny fehin-kevitra fampidirana ianao dia mety hisalasala ny amin'ny famaranana. Saingy ny tena izy dia, Apple iPad 2 dia manana traikefa tsy hay lazaina amin'ny mpampiasa ka tsy misy olon-kafa eny an-tsena afaka manome, farafaharatsiny izao. Ny fitaovana malaza be dia be amin'ny endriny maro, ary hodinihintsika amin'ny Wi-Fi sy 3G ilay kinova. Manana fahamendrehana toy izany izy amin'ny haavony 241.2mm sy ny sakany 185.5mm ary ny halalin'ny 8.8mm. Mahatsiaro ho tsara be eo am-pelatananao miaraka amin'ny lanjan'ny 613g. Ny efijery 9.7inches LED backlit IPS TFT Capacitive touchscreen dia misy ny vahaolana amin'ny 1024 x 768 miaraka amin'ny hakitroky pixel 132ppi. Amin'ny maha Asus Eee Pad anao, midika izany fa azonao atao ny mampiasa ny iPad 2 amin'ny hazavan'ny andro tsy misy olana. Ny tampon'ny oleophobic mahatohitra ny dian-tànana sy ny ratra dia manome tombony fanampiny ho an'ny iPad 2, ary ny sensor sensor accelerometer sy ny sensor Gyro dia natsangana ihany koa.
Ny tsiro manokana an'ny iPad 2 nofidianay hampitaha dia ny fifandraisana HSDPA ary koa ny fifandraisana Wi-Fi 802.11 b / g / n. Io dia singa iray mampiavaka ny iPad 2. Na dia hita any amin'ny ankamaroan'ny toerana aza ny fifandraisana Wi-Fi, tsy misy olona afaka miantoka ny fifandraisana Wi-Fi na aiza na aiza alehany. Eo no ilalaovana ny fifandraisana HSDPA. Araka ny efa nolazaiko tao amin'ny fampidirana, ny aingam-panahy voalohany amin'ny Tablet PC dia ny fahafaha-miserasera amin'ny Internet. Raha tsy tokony hanana io toetra voalohany io amin'ny fotoana rehetra isika, dia misy ny fizotran'ilay fotokevitra mihitsy. Apple dia nahatsapa ny tetezana nanelanelana izany elanelana izany ary niresaka tsena hafa iray hafa tamin'ny famoahana andiana iPad 2 hafa izay ny hany fifandraisana dia amin'ny alàlan'ny wi-fi.
Ny iPad 2 dia miaraka amina processeur ARG Cortex A-9 1GHz roa miaraka amin'nyPowerVR SGX543MP2 GPU eo ambonin'ny chipset Apple A5. Io dia tohanan'ny RAM 512MB sy safidy telo fitahirizana 16, 32 ary 64GB. Mety hieritreritra ianao fa raha ampitahaina amin'ny fitaovan'ny Eee Pad dia tsy manakaiky akory ny iPad 2. Amin'ny lafiny ara-teknika, hamafisiko izany fanambarana izany raha tsy misy eritreritra faharoa, fa amin'ny fomba fijery azo ampiasaina, tsy izany no izy. Raha ny momba anay, ny elanelana dia mitoetra ao amin'izay mifehy ny loharano. Apple dia manana ny iOS 4 iraisan'izy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny iPad 2, ary izy io dia miaraka amin'ny fanavaozana ny iOS 5. Ny tombony azo amin'ny OS dia ny fanatsarana azy tsara ho an'ilay fitaovana mihitsy. Tsy atolotra ho an'ny fitaovana hafa; noho izany, ny OS dia tsy mila generic toy ny android. Ny iOS 5 dia mifototra amin'ny iPad 2 sy iPhone 4S, izay midika fa mahatakatra tsara ny fampitaovana ary mitantana tsara ny ampahany rehetra aminy mba hanomezana traikefa amin'ny mpampiasa mahatalanjona na dia tsy misy fisalasalana kely aza.
Apple dia nanolotra fakantsary roa natsangana ho an'ny iPad 2, ary na dia fanampin-javatra tsara aza ity dia misy efitrano lehibe hanatsarana azy. Ny fakan-tsary dia 0.7MP ihany ary tsy tsara kalitao amin'ny sary. Afaka maka horonantsary 720p @ frame 30 isan-tsegondra, izay tsara. Amin'ny fomba fanonerana, Apple dia naneho hatsaram-panahy feno tsara tamin'ny fampidirana rindrambaiko mangatsiaka amin'ny alàlan'ny fakantsary toy ny Face Time sy Photo Booth. Izy io koa dia miaraka amin'ny fakantsary faharoa miaraka amina Bluetooth v2.0 izay hahafaly ireo miantso horonantsary. Ity gadget tsara tarehy ity dia tonga amin'ny loko mainty na fotsy ary manana endrika marevaka izay mahafaly ny masonao fotsiny. Ny fitaovana dia misy GPS misy fanampiana, TV sy serivisy iCloud malaza. Izy io dia mifanindran-dàlana amin'ny fitaovana Apple rehetra ary manana ny singa malefaka tafiditra ao aminy toy ny tsy mbola natao tamin'ny takelaka hafa.
Apple dia nametaka ny iPad 2 tamina bateria 6930mAh, izay be dia be, ary misy fotoana mahomby mandritra ny 10 ora, izay tsara amin'ny Tablet PC. Izy io koa dia misy rindrambaiko sy lalao iPad mifototra amin'ny iPad izay manararaotra ny natiora tsy manam-paharoa amin'ny fitaovana.
Fampitahana fohy an'ny Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 vs Apple iPad 2
• Transformer Prime dia manana processeur Quad core 1.3GHz eo ambonin'ny chipset NvidiaTegra 3, raha iPad 2 kosa manana processeur ARG Cortex A9 dual core 1GHz eo ambonin'ny chipset Apple A5.
• Manana Transformera 1GB ny Transformer Prime raha toa kosa ny iPad 2 miaraka amin'ny RAM 512MB.
• Transformer Prime dia manana efijery Super 1 IPS LCD Capacitive 10,1 santimetatra izay misy valiny 12800 x 800 teboka amin'ny hakitroky piksela 149ppi, raha iPad 2 kosa manana efijery LED backlit IPS TFT Capacitive 9,7 santimetatra ahitana vahaolana amin'ny 1024 x 768 sy 132ppi.
• Transformer Prime somary manify sy maivana noho ny iPad 2.
• Transformer Prime dia mampiasa Wi-Fi ho fifandraisana tokana misy azy raha iPad 2 kosa afaka mampiasa Wi-Fi, ary koa, fifandraisana HSDPA.
• Transformer Prime dia misy tahiry anatiny 16 sy 32GB miaraka amina memoara azo havaozina 32GB amin'ny alàlan'ny karatra microSD, raha ny iPad 2 kosa dia tonga amin'ny fanontana 16, 32 ary 64GB tsy misy slot fanitarana fahatsiarovana.
• Transformer Prime dia miaraka amin'ny fakan-tsary 8MP mandroso raha toa kosa ny iPad 2 dia misy fakan-tsary 0.7MP ihany.
• Transformer Prime dia mampanantena fiainana bateria mandritra ny 12 ora ary iPad 2 kosa mampanantena fotoana mahomby 10 ora.
Rehefa namaky ianao dia mety nisy zavatra maro tao an-tsainao tao. Fa manantena aho fa afa-po amin'ny famintinana mialoha napetrakay tamin'ny fampidirana. Andao hofonosintsika manodidina azy ny tapany faharoa amin'ny famaranana. Izy io dia zava-misy fa ny iPad 2 dia miaraka amin'ny iOS5 nohavaozina izay mety indrindra ho an'ny fampitaovana an'ny iPad 2. Midika izany fa ny fanatsarana dia voafaritra fa tsy generic iray. Izy io koa dia mitazona ny toerany ho tsena fivarotana fampiantranoana fampiharana sy lalao an'arivony izay namboarina tsara hampiasaina amin'ny iPad 2. Ho fanampin'izany, Apple koa dia manome serivisy iCloud sy serivisy hafa isan-karazany handresy ny mpanjifa. Ankoatra ireo rehetra ireo, iPad 2 dia manana akanjo ambony sy haja ary laza. Ny marika be laza dia manome fihobiana isaky ny mahita azy. Izany no fanamby niadian'ny Asus Eee Pad. Mazava ho azy, nandresy tamin'ny lafiny fampisehoana sy kianja. Na izany aza, araka ny nomarihintsika tao amin'ireo andalana etsy ambany, ny Android dia tsy nohatsaraina ho an'i Eee Pad fotsiny. Niampy an'izay, tsy namboarina ho azo ampiasaina miaraka amin'ireo quad cores atolotry ny Eee Pad hatramin'izao. Midika zavatra iray izany, ny elanelana misy eo amin'ny tena ao anatiny sy ny habetsaky ny ao anatiny no nampiasaina. Rehefa tonga ny andro ka izay ao anatiny no ampiasaina amin'ny fomba tsara indrindra, iPad dia hanana mpanohitra matanjaka be tsy azony resena amin'ity famerenana ny iPad 2 ity.
Fahasamihafana eo amin'ny Viewsonic ViewPad 10pro sy iPad 2 Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy Tab 7.7 sy iPad 2 Fahasamihafana eo amin'ny Toshiba AT200 sy iPad 2 Differnce eo anelanelan'ny Sprint Evo View 4G sy Apple iPad 2 Fahasamihafana eo amin'ny HTC Puccini sy iPad 2
Filed Under: Ny hafa tagged With: Apple iPad 2 , Apple iPad 2 review , Asus Eee Pad Transformer Prime , Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 , Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 review , Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 specs , ipad 2 , iPad 2 famerenana , tablette quad-core Tegra 3 , quad-core an'ny Nvidia
Fahasamihafana eo amin'ny andian'ny omby sy i Kairo
Fahasamihafana eo amin'ny metatra toradroa sy ny metatra toradroa
Fahasamihafana eo amin'ny Ferredoxin sy Rubredoxin
Fahasamihafana eo amin'ny antsantsa sy ny trozona
Fahasamihafana eo amin'ny Solvolysis sy Aminolysis